I-Fibromyalgia -Ubuhlungu beNhlungu - iphepha 3 le-11
Iimpawu ezi-7 zokuqala zeFibromyalgia
21 / 12 / 2017 /3 Amazwana/i udinwe/av ubuhlungu
7 Iimpawu zokuqala zeFibromyalgia
Nazi iimpawu ezi-7 zokuqala ze-Fibromyalgia ezikuvumela ukuba uqaphele isifo esingapheliyo kwinqanaba lokuqala kwaye ufumane unyango olululo.
Ukuxilongwa kwangoko kubaluleke kakhulu ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo ngokubhekisele kunyango, uqeqesho kunye nohlengahlengiso kubomi bemihla ngemihla. Akukho namnye kwaba basebenzi kuthetha ukuba unakho ngokwakho udinwe, kodwa ukuba ufumana naziphi na iimpawu, sicebisa ukuba ubonane nodokotela wakho ukuze abonane.
-Sifuna ukuJolisa ngakumbi kwiintlungu ezingapheliyo
Sifumana ukuba isigulane esinentlungu engapheliyo liqela elingahoywayo kwaye lisoloko likhohliwe. Kufuneka kugxilwe ngakumbi kuphando olujoliswe kwimeko echaphazela abaninzi -kuba kubonakala ukuba uninzi aluvumelani noku, ngelishwa-yiyo loo nto sikukhuthaza ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, ngokungcono ngokusebenzisa iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi: "Ewe kuphando olongezelelweyo kwi-fibromyalgia". Zive ukhululekile ukucofa iqhosha elithi "share" (iqhosha lokwabelana) kamva kwinqaku ukuze wabelane ngeposi ngakumbi kwi-facebook yakho. Ngale ndlela, umntu unokunceda ekwenzeni 'isifo esingabonakaliyo' sibonakale ngakumbi kwaye aqinisekise ukuba izibonelelo zophando kwiindlela ezintsha zonyango zinikwa ingqwalaselo ephambili.
Kumasebe ethu ahlukeneyo eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kunye noViken (Eidsvoll Isandi og Råholt) oogqirha bethu banobuchule obukhethekileyo obuphezulu kuvavanyo, unyango kunye noqeqesho lokubuyisela kwintlungu yesithende kunye nonyawo. Cofa kwiikhonkco okanye apha ukufunda ngakumbi malunga namasebe ethu.
- Iimpawu zinokwahluka
Siyazi ukuba iimpawu zokuqala zefibromyalgia zahluke kakhulu emntwini ziye emntwini kwaye ke ngoko qaphela ukuba ezi mpawu zilandelayo kunye neempawu zekliniki ziyinto eqhelekileyo -Kwaye ukuba inqaku alinawo uluhlu olupheleleyo lweempawu ezinokuchaphazeleka kwinqanaba lokuqala le-fibro, kodwa kunoko ukuzama ukubonisa ezona mpawu zixhaphakileyo kwinqanaba lokuqala le-fibromyalgia.
Zive ukhululekile ukusebenzisa indawo yokuphawula engezantsi kweli nqaku ukuba uphoswa yinto-ke siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuyongeza. Siyakukhumbuza ukuba uyakufumana ividiyo yoqeqesho phantse ezantsi kwinqaku.
Funda: Imithambo emi-5 yokuziQhelanisa nalabo abaneFibromyalgia (kubandakanya ividiyo yoqeqesho)
1. «Inkungu enkungu»
Inkungu yentsomi, ekwabizwa ngokuba yi "brain fog", luphawu lwabantu abaninzi abane-fibromyalgia. -Kwaye okuhlala kubonakala kwangoko kwangoko kuxilongo. Inkungu yobuchopho inokukhokelela kubuchule bokwexeshana bokungakwazi ukucinga kakuhle (yiyo loo nto "inkungu") kunye nokufumana amagama afanelekileyo xa uthetha.
Inkumbulo yexesha elifutshane iyachaphazeleka kwaye umntu unokwakheka ngokwahlukileyo nangakumbi ngendlela engeyiyo kunokuba beqhele ukwenza. Luphawu oloyikisayo nodidayo, kuba kunokuba luphawu olucacileyo kwabo bachaphazelekayo. Abantu abaninzi baphawula ukuphucuka ukuba baphumla ngokwaneleyo.
Abachaphazelekayo? Joyina iqela le-Facebook «I-Rheumatism - INorway: Uphando kunye neendaba»(Cofa apha) uhlaziyo lwamva nje olwenziwe kuphando kunye nokubhala kwimithombo yeendaba malunga nale ngxaki. Apha, amalungu anokufumana uncedo kunye nenkxaso-ngalo lonke ixesha lemini- ngokutshintshana ngamava abo neengcebiso. Sikwacebisa uMbutho waseNorway Rheumatism Association (NRF) apho ungafumana khona ukulandelwa okuhle kunye nenkxaso ngombutho wabo wesizwe.
2. I-Allodynia: Ukunyusa ngokungaqhelekanga imvakalelo yokuthinta
Isibonakaliso esibonakalayo se-fibromyalgia kukuziva okwandayo kunye nentlungu yokuphathwa rhoqo. Ngamanye amazwi - ukwanda uvakalelo ulusu kunye nezihlunu. I-Allodynia ithetha ukuba ukudibana okuqhelekileyo (okungafanele konakalise) - njengomntu ocofa kancinci umsipha okanye ukuphulula ulusu- kunokuba buhlungu.
Uphawu lukhona ngakumbi ukuba umntu ochaphazelekayo akaphilanga okanye udiniwe engqondweni.
3. I-Paresthesia: Utshintsho lweemvakalelo
Iimvakalelo ezingaqhelekanga njengokuthuthumela kunye nokuqina kwethambo kunye nolusu kunokubakho kubantu abachaphazeleka yi-fibromyalgia. Rhoqo, kukho, kwakhona, uxinzelelo lomzimba nolweemvakalelo olubonakala luphawu oluphambili kunye nomatshini obangela le ngxaki.
Ke, ziindlela kunye neendlela zonyango ezinokunceda ekuqinisekiseni ukusebenza okungcono kubomi bemihla ngemihla, kunye nokunciphisa izinto ezingathandekiyo, ezibaluleke ngakumbi.
Ukudinwa okungapheliyo kunye nokuba buthathaka
I-Fibromyalgia inokubangela uxinzelelo olukhulu emzimbeni nasengqondweni - nto leyo enokubangela ukuba uzive udiniwe phantse lonke ixesha. Ngenxa yentlungu ephezulu kwiimisipha, abantu abaninzi banokubakho ukunciphisa amandla emisipha ebangelwa yintlungu kunye nokuchaphazela ukusebenza kwentliziyo.
Oku kudinwa okungapheliyo kunye nokuziva uhlala udiniwe kunokubangela ukungasebenzi kakuhle kunye nobuchule.
5. Intloko yeFibromyalgia
Abo bachatshazelwe yi-fibromyalgia bandise ubuntununtunu kwimisipha ye-musisi, ethi emva koko inike imiqondiso yentlungu ethe kratya nangakumbi - rhoqo nangokubamba ukukhanya (allodynia). Oku kukhokelela ekwandeni kweziganeko zentloko kwaye ngakumbi uhlobo lwentloko yokudibanisa ebizwa ngokuba «udinwe intloko ebuhlungu«.
Funda: U kufunda: I-Q10 inokunciphisa iintlungu ze-fibromyalgia
6. Ukwanda komsebenzi wokubila
Ukhe waqaphela ukuba ubila kakhulu kunesiqhelo? Abaphandi bakholelwa ukuba ngumsebenzi owandayo wokuthuka phakathi kwabo bachatshazelwe yi-fibromyalgia (kunye nabo bachatshazelweyo ME / CFS) ubukhulu becala kungenxa yeempendulo ezizimeleyo zomzimba-okt amajoni omzimba ahlala esebenza ixesha elongezelelekileyo kwaye kwiinzwane zawo 24/7.
Kuyakholelwa nokuba ukuziva banzi kwesikhumba kunokubangela ukuba usabele ngakumbi kubushushu kwaye kubande kunabanye.
7. Iingxaki zokulala
Ngenxa yokunyuka kwamanqanaba entlungu kunye nokuziva usiva "iintlungu" emzimbeni, kuhlala kunzima kwabo bachaphazelekayo ukulala. Kwaye xa bevunyelwe ukuba balale, yimeko yokuba ubuthongo obunzulu buhlala bukude- kwaye bahlala kule nto siyibiza ngokuba "ukulala kwe-REM" -oko kukuthi, yeyona 'ibuthathaka' kwaye yeyona ndlela yokungalali.
Ingxaki ngale nto kukuba ukungalali ngokwaneleyo kukhokelela ekonyukeni okukhulu kokuziva kwemisipha kunye nentlungu. -Ke ke kulula ukuba uphelele kwisangqa esikhohlakeleyo apho umntu aphazamisa enye into.
Oku kugxininisa ukubaluleka kokulala kubaluleke kakhulu kwabo bane-fibromyalgia kunye nentlungu engapheliyo. Kukho iingcebiso kunye namaqhinga malunga nendlela yokuphucula ubuthongo - into onokufunda ngayo ngakumbi kwinqaku apha.
Kucetyiswa iMilinganiselo yokuSelf yeFibromyalgia
Ingcebiso elungileyo: - Iimethi ze-acupressure zinokuba luncedo ekuphumleni
Uninzi lwezigulane zethu zisibuza imibuzo malunga nokuba yeyiphi imilinganiselo yokuzimela esiyincomayo kwi-fibromyalgia. Ngenxa yokuba iimpawu zinokwahluka, oku kunokuba nzima ukuphendula. Kodwa siyazi ukuba i-fibromyalgia ibangela ukunyuka koxinzelelo lwe-muscle kwaye ihlala inyusa uvakalelo lwemisipha. Ukuzilinganisa ngokwendalo kukuphumla. Baninzi baziva ukuba mat acupressure isebenza kakuhle ukunciphisa uxinzelelo kumqolo kunye nentamo. Imethi esidibanisa nayo apha kwaye ngokusebenzisa lo mfanekiso ungentla kwakhona unenxalenye yentamo eyahlukileyo eyenza kube lula ukusebenza kwemisipha yentamo. Kwabaninzi, oku kunokuba lutyalo-mali olulungileyo kwimpilo yabo.
Kwakhona, sifuna ukwenza njalo buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho(nceda udibanise ngokuthe ngqo kwinqaku). Ukuqonda kunye nokugxila okwandisiweyo ngamanyathelo okuqala kubomi bemihla ngemihla ababonakalayo abachaphazeleka yintlungu engapheliyo, i-rheumatism kunye ne-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia ibangela ukwanda kweentlungu kwiimisipha nakwizihlanganisi- Indlela yokuzihlangula
Apha ngezantsi sibonisa ividiyo yoqeqesho ngoqeqesho olwenziwe ngomzimba olunokukunceda ukunciphisa intlungu yakho.
I-Fibromyalgia ihlala ibangela iintlungu ezibalulekileyo kwizihlunu, i-tendons kunye nokudibana. Le vidiyo yokuzivocavoca ngezantsi ijolise ekuncedeni ukunyusa ukuhamba okuhlanganyelweyo, ukunciphisa iintlungu kunye nokwandisa ukuhamba kwegazi kwendawo. Cofa apha ngezantsi ukuze ubone.
Sinikezela ngovavanyo lwangoku, unyango kunye noqeqesho lokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokuxilongwa kweentlungu ze-rheumatic.
IPHEPHA ELANDELAYO: Iindlela ezisi-7 ze-LDN zinokukunceda ngokuchasene neFibromyalgia
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-tidlige-tegn-edited-700.jpg?media=1648573622 445 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2017-12-21 10:23:252022-03-18 16:30:16Iimpawu ezi-7 zokuqala zeFibromyalgia
10 / 03 / 2019 /1 Comment/i udinwe/av ubuhlungu
Iimpawu zeFibromyalgia ezaziwayo: Ezi zinokuGxila kwiimpawu zakho kunye neNhlungu
I-Fibromyalgia flares ligama lamaxesha xa intlungu yakho iba mandundu. La maxesha akhulisayo ahlala eqaliswa ngu-okuthiwa uphelelwe.
Apha uya kufunda ngakumbi malunga nezisixhenxe ezinokubangela kunye neziqala ezinokuqala I-fibromyalgia flares kwaye zenze zibe mandundu iimpawu zakho.
- I-Fibromyalgia luxilongo olunzima
I-Fibromyalgia inokuhamba ngaphaya kobomi bemihla ngemihla kunye nomgangatho wobomi - nangona ngaphandle kokuvutha. Kodwa xa isiqendu esibuhlungu siqala, ezi zimpawu kunye neentlungu zinokuphinda kabini ngobusuku. Ayilunganga kakhulu. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ufunde okungakumbi malunga nezinto ezinokubangela- kwaye ubuncinci onokuzenza ukubathintela. Silwela abo banezinye izifo ezinganyangekiyo kunye nezifo ukuba babe namathuba angcono onyango kunye noviwo - into ayivunyelwanga ngumntu wonke, ngelishwa. Yabelana ngenqaku, njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube Kwimithombo yeendaba zentlalo ukusijoyina kumlo wokuphila ubomi bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
Eli nqaku lihamba ngeendlela ezisixhenxe eziqhelekileyo ezibangela iintlungu ze-fibromyalgia kunye neempawu zakho ziba zimbi - ezinye zazo zinokumangalisa. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi kwaye ufumane neengcebiso ezilungileyo.
1. Uxinzelelo lweemvakalelo kunye nolwasemzimbeni
Mhlawumbi enye yezona zinto zincinci ezibangelayo kunye nezizathu zokwandisa iimpawu ze-fibromyalgia. Uxinzelelo luza ngeendlela ezininzi kunye neemilo-yonke into esuka kwimingeni yeemvakalelo, iziqendu zengqondo kunye noxinzelelo lomzimba. Siyazi nokuba nge-fibromyalgia sinesistim ye-hypersensitive neroses ehlangabezana ngakumbi noxinzelelo.
Uxinzelelo oluqhelekileyo olunokubangela i-fibromyalgia flare-up:
Iingxaki zeemvakalelo (ukuzithemba okuphantsi, ixhala kunye nokudakumba)
Ukufudukela kwenye indawo yokuhlala
Sine-fibromyalgia engaphezulu luvo umsindo (Owona nobangela wefogrotic fog) kunabanye. Oku kuthetha ukuba sineempawu ezahlukeneyo zombane emzimbeni wethu kwaye asinazo iindlela ezithile zokulahla kwingqondo yethu. Iinzululwazi zikholelwa ukuba ngokuqonda ngcono le hypersensitivity, umntu unokufumana unyango. I-Yoga, ukuzolula kunye nokuziqhelanisa nokunyakaza kunokuba yindlela elungileyo yokuphelisa uxinzelelo lwengqondo kunye nomzimba- ngakumbi ngaphambi nje kokuba ulale. Kwinqaku elingezantsi ungabona inkqubo yoqeqesho ekubonisa ukuziqhelanisa nokuzola okuhlanu.
Cofa apha ukuze ufunde ngakumbi malunga nezi ntshukumo zentshukumo - okanye ubukele ividiyo engezantsi (VIDEO).
Ingcebiso: Imilinganiselo yokuphumla ngokuchasene nokuBambisa okunxulumene noxinzelelo
Ingcebiso elungileyo: -Sebenzisa i-Acupressure Mat yokuphumla
Uninzi lwezigulane zethu zisibuza malunga neendlela ezinokuthi zibe nolawulo olungcono malunga neentlungu zabo. Kwizigulane ze-fibromyalgia, sihlala sigxininisa amanyathelo okuphumla-njengokusebenzisa mat acupressure (cofa apha ukufunda ngakumbi ngayo - ikhonkco livula kwifestile entsha yokufunda). Sincoma ukusetyenziswa rhoqo, kwaye ngokukhethekileyo yonke imihla ukuba uziva uzuza kuyo. Njengoko uqhelana nokusebenzisa i-mat, unokwandisa ixesha lokuba ulele ixesha elingakanani kuyo.
Eminye iMilinganiselo eNtyityisiweyo yokuSethula kwiintlungu ezingapheliyo kunye neRheumatic
IArnica cream okanye isixhobo sokufudumeza ubushushu (abanye bavakalelwa kukuba oku kunokuphelisa ezinye iintlungu)
2. Ukulala kakubi
Thina nge-fibromyalgia sihlala sihlupheka ngenxa yokungalali kakuhle kunye nokunciphisa umgangatho wokulala. Phakathi kwezinye izinto, oku kuthetha ukuba sihlala sivuka kwaye siziva sidiniwe emzimbeni ekuseni. I-Fibromyalgia ithintela ubuthongo obunzulu kwaye isigcina sikula amanqanaba okulala (xa sifika silele nakanye).
Ingxaki ngale nto kukuba ukulala yindlela yomzimba yokwenza kunye nokufumana uxinzelelo lwengqondo kunye nolweemvakalelo. Xa silele, ingqondo iyahlamba izitya kwaye ihlambulule onke amava ethu kunye nemvakalelo. Ukunqongophala komgangatho wokulala kuhamba ngaphaya kwale nkqubo-ethi yona ibe negalelo ekuqaqambiseni iintlungu ze-fibromyalgia.
3. Utshintsho lwemozulu kunye nobushushu boBushushu
Akukho ntsomi yokuba i-rheumatologists ifumana iimpawu eziya zisiba mandundu xa utshintsho lwemozulu- yinto exhaswa kuphando.(1). Ngokukodwa, uxinzelelo lwe-barometric (uxinzelelo lomoya) lwaluthatha isigqibo xa kusenziwa impawu ezonyanyisa. Uninzi luphinda baphendule ngcono elangeni nakwimozulu efudumeleyo.
Imozulu ezinzileyo ke ilunge kuthi ngethambo le-rheumatism (fibromyalgia) ethambileyo. Kodwa eNorway yethu ethandekayo, kunjalo ukuba sinamaxesha emozulu acacileyo kwaye ngenxa yoko kananjalo utshintsho olukhulu lwemozulu ngamanye amaxesha-olunokuba nefuthe elibi ngohlobo lweempawu kunye nentlungu ye-fibromyalgia.
Ihlala ixelwa ngokukodwa malunga nokudodobala kwentamo kunye namagxa e-rheumatics kwiinguqu zemozulu ezinjalo. Yeyiphi, phakathi kwezinye izinto, ekhokelela koko sikubizayo stress entanyeni. Unokufunda ngakumbi malunga nokuxilongwa kwinqaku leendwendwe ukusuka kwiziko laseRåholt Chiropractor kunye nePsychotherapy kwinqaku elingezantsi.
4. Ukwenza okuninzi ngeentsuku ezilungileyo
Siyayazi ukuba injani, kodwa kunjalo sihlala siwela kumgibe ofanayo-oko kukuthi ukutshisa umpu omninzi xa siziva singcono noko. Nabani na oxilonga ngokugula okungapheliyo unokuqonda ukuba KUKHO NGOKUFANELEKILEYO xa iintlungu ziphela ngokukhawuleza. Kodwa senze ntoni emva koko? Ukutshisa umgubo omkhulu!
Ukugcinwa kwendlu, ukuthunywa okanye umbutho wokuzonwabisa-sinotyekelo lokudinwa ukuvumela isazela esibi sithathe indawo. "Kufuneka ndicoce indlu ngoku" okanye "uGunda noFride bangathanda ukudibana nam kwikhefi namhlanje" - ke siziphosa kuyo. Ingxaki kuphela kukuba amandla ombane ahlala ephuculwa okwethutyana- kunye ne-BANG emva koko siye kwi-bang.
Enye indlela yokunyusa amandla okusebenza kunokuba kukutya ngokufanelekileyo nangakumbi kulungiselelwe isifo sakho. Ukutya 'kwe-fibromyalgia' kulandela iingcebiso zesizwe zokutya kunye nezikhokelo. Unokufunda ngakumbi ngayo kwinqaku elingezantsi.
5. Umjikelo wokuya esikhathini kunye nokutshintsha kweHormonal
Iinguqu zeHormonal zihlala zidityaniswa kakhulu kukukhula kwentlungu ye-fibromyalgia kunye neempawu. Inye asiqinisekanga ukuba kutheni le nto ilunge kakhulu kuba ilungile -Kodwa inxulunyaniswa ne-hypersensitivity kwinkqubo yemithambo-luvo yomzimba.
Umntu unokufumana ukonyuka ngokutshintsha kwehomoni-njengoko kubonwe ngu:
Izifundo ezithile zophando ziye zaphawula ukuba nge-fibromyalgia sisoloko sinamanqanaba asezantsi e-dopamine yehomoni kunye ne-serotonin. Ke, umntu unokubona ukuba iihormoni zidlala indima engaziwayo kwi-rheumatism yezicubu ezithambileyo ukuza kuthi ga ngoku, ekufuneka ziphandwe ngakumbi.
Ukwazi amanyathelo endalo okulwa nokosuleleka kunokunceda i-rheumatics. Apha ngezantsi ungafunda ngakumbi malunga namanyathelo asibhozo okulwa ne-immune.
6. Isifo kunye neFibromyalgia
Ukugula, okufana nokubanda okuqhelekileyo kunye nomkhuhlane, kunokwenza intlungu yakho ye-fibromyalgia ibe mandundu. Oku kungenxa yokuba kwii-rheumatologists ezithambileyo, umzimba kunye nengqondo zihlala zisebenza ukulawula nokulawula iimpawu zentlungu -Kwaye ukuba imisebenzi eyongezelelweyo, enjengentsholongwane yomkhuhlane, inokukhokelela kukugcwala okukhulu.
Xa sinesinye isifo emzimbeni-ukongeza kwi-rheumatism yethishu ethambileyo-ke umzimba kufuneka udlulisele imisebenzi yawo. Ngenxa yoko, zimbalwa izixhobo zokunceda ukugcina i-fibromyalgia ngokuyinxenye ichongiwe, kwaye ngequbuliso sisazi ukuba iimpawu kunye nentlungu zibhengeza ukufika kwazo (ngokuya kukhula).
Sine-fibromyalgia siqhelene nefuthe lomkhuhlane oqhelekileyo kwimisipha yomzimba, amalungu kunye nezicubu ezithambileyo- emva kwayo yonke loo nto, sihlala nayo yonke imihla. Kodwa ke yayikule nto ukuba amaziko aliqela anokugoba ngaphezulu kwelinye kwaye aqinise elinye. Yile ndlela kanye i-rheumatists ethambileyo ithambisa ngayo umkhuhlane.
7. Ukwenzakala, umothuko kunye nokuSebenza
I-Fibromyalgia ibangela i-hypersensitivity kwizicubu ezithambileyo kunye nenkqubo ye-nervous. Ngokuchanekileyo ngenxa yoko, ukulimala kwangaphandle (ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo, ukuguqulwa kwamadolo) okanye ukuhlinzwa (umzekelo, i-arthroscopy yamagxa okanye i-hip prosthesis) kunokukhokelela ekugqithiseni kweempawu zakho. Ungayithelekisa nokuphendula okuvela emzimbeni wakho okuphelisa iintlungu.
I-Hypersensitivity ke iphumela ekungahambini komgaqo weempawu zentlungu kunye nokuziva kwengqondo yethu. Ke ngoko, ungenelelo olukhulu, njengokuhlinzwa kweenqanawa, kunokubangela ukuba imiqondiso yeentlungu idubule esilingini ngenxa yomonakalo weethisisi ezenziweyo kolu tyando.
Oku kuthetha ukuba ukongeza ekululameni kwakhona emva kokuhlinzwa kakhulu, sikwathathela ingqalelo ukuba oku kunokubangela ukuwohloka okukhulu kwentlungu yethu ye-fibromyalgia. Ayilunganga! Unyango ngokwasemzimbeni kunye noqeqesho oluthile lubalulekile ekunciphiseni ithuba lokuhlaselwa ziintlungu emva koqhaqho.
Sithemba ngokunyanisekileyo ukuba eli nqaku linokukunceda ekulweni neentlungu ezingapheliyo. Ukuba le yinto oyithandayo, ke siyathemba ukuba ukhethe ukujoyina usapho lwethu kumajelo eendaba ezentlalo kwaye wabelane ngenqaku ngakumbi.
Sinikezela ngovavanyo lwangoku, unyango kunye noqeqesho lokubuyisela kwintlungu engapheliyo.
(Sizama ukuphendula kuyo yonke imiyalezo kunye nemibuzo kwiiyure ezingama-24-48)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/FIBROMYALGITRIGGERE.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-03-10 12:52:402022-03-18 16:06:44Iimpawu ezi-Fibromyalgia ezaziwayo
Iphepha loku-3 lama-11<12345>»